Intee ayey miisaaniyadda AL-SHABAAB la eg tahay sidee loo qarash gareeyaa? – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAIntee ayey miisaaniyadda AL-SHABAAB la eg tahay sidee loo qarash gareeyaa?
Intee ayey miisaaniyadda AL-SHABAAB la eg tahay sidee loo qarash gareeyaa?
October 16, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Intee ayey miisaaniyadda AL-SHABAAB la eg tahay sidee loo qarash gareeyaa?
Sida uu qoray machadka daraasaadka amni ee Hiraal, Xafiiska maaliyadda Al-Shabaab waxa ay lacagaha u qeybiyaan Saddex: Saadka, raashinka, shidaalka iyo wixii la midka ah: Sida xaaladaha deg degga ah, kuwaas oo lagu qarash gareeyo hoggaanka Al-Shabaab laguna badbaadiyo: Qeybta u dambeeysa waxaa la siiyaa xafiisyada wasaaradaha ee gobolada halkaas oo qoondada lagu sameeyo.
Gobolada qaniga ah waxa ay isticmaalaan waxa ay rabaan waxa ayna inta ugu badan ku qarash gareeyaan xarumaha dhexe ee Al-Shabaab; sida deegaanada faqriga ah, tusaale Mudug iyo Galgaduud oo aan iska bixin karin qarashaadkooda, waxa ay taageero ka helaan xarumaha dhexe.
Madaxa xafiis walba waxa uu lacagaha lagu bixiyo hawlgalada socda ka helaa xafiiska maaliyadda ee heer gobol. Hase ahaatee, waxyaabaha deg degga ah waxaa laga qaadayaa gudoomiyaha gobolka, oo loo yaqaan madaxa Wilaayada. Waxaa xiiso leh, lacagaha deg degga ah bil walba waxa ay dhaafaan intii loogu talagalay, waxaana loo dhiibaa madaxa deegaanka haddii la adeegsado iyo haddii kaleba.
Lacagaha deg degga ah oo ka bilowda bil walba $3,000 ilaa iyo $10,000 waxaa loo adeegsadaa qaab deeq ahaan oo la siiyo madaxa xafiisyada heer gobol. Waxaa laga tusaale qaataa in gobol walba xafiiskeeda uu isticmaalo $7,000, sanad walba waxaa markaa ku baxa xafiis walba oo gobol $502,000 taas oo ka dhigan $4.5mn in ay ku baxaan sagaalka gobol ee ay maamulado ka dhisan yihiin.
Kooxda waxa ay qarashaad badan ku bixisaa qorista dagaalyahanada oo uga baxa qaab mushaar. Dagaalyahanada lugta/ifentariga waa raqiis, waxa ay helaan lacago ka bilowda $30 bishii halka xaasaskooda ay helaan $30 kale oo dheeri ah halka $20 la siiyo halkii cunug ee uu dhalay. Iyaga oo leh 5,000 oo dagaalyahanno shaqeeya hadda, waxa ay lacagta mushaar ahaan uga baxda ka dhigeysaa sanadkii $3 milyan halka $3.6 milyan ay uga baxaan raashin, taas waxaa dheer in dagaalyahan walba maalintii helo $2.
Sirdoonka Al-Shabaab yaa hela mushaarka ugu badan, waxa uuna ka bilowdaa $200 bishii, waxaa u dheer dhaqaale kale oo lagu kabo haddii ay ka hawl galaan deegaan cadaw. Qarashaadka ku baxa waxaa sanadkii lagu qiiyaasaa $1.5 milyan, sida ay ku ogaatay Hiraal dhaq dhaqaaqooda.
DHAGEYSO: Xog Culus Oo Sheegeysa Qaraxyo Kale Oo Al Shabaab Ka Geysan Rabaan Magaalada…
DAAWO: CC Shakuur oo soo ‘bandhigay video muujinaya in wasiirada DF la bahdilo’Yaa kamid ah
704,032 total views, 1,249 views today
704,032 total views, 1,249 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
703,908 total views, 1,249 views today
703,908 total views, 1,249 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
703,938 total views, 1,249 views today
703,938 total views, 1,249 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
704,000 total views, 1,249 views today
704,000 total views, 1,249 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
704,054 total views, 1,249 views today
704,054 total views, 1,249 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]